KOM: ဖတ်သွားတယ်ရှင့် ကျှန်မ ကတော့ စကားပြောလေ့ မရှိဘူး။ အိမ်ရှင် မပါ အလုပ်မလုပ်ပါဘူးလို့ တခါထည်းဘဲ နားအေားအောင် ပြောထားပါတယ်။
ဘယ်တော့မှ အစာကြေမယ့် ကိစ္စလဲမသိပါဘူးဗျာ။ လုပ်စရာရှိတာလုပ် စုစရာရှိတာစုပြီး ပြန်တာဘဲ ကောင်းပါတယ်။
လတ်တလောတော့ ဒေသတွင်းမှာ ခပ်စွာစွာ သူပဲ ရှိတော့လည်း သူတို့က လေသံ ပစ်နိုင်ကြတာပေါ့ဗျာ...
ခုတော့ Dubai က နောက်က လိုက်တက်လာတော့ သူတို့လည်း ခေါင်းကျိန်းနေကြပါပြီ...
စိတ်ဝင်တစား မှတ်ချက်ပြုတာ ကျေးဇူးပါဗျာ...
စင်္ကာပူမှာforeign worker inflowsတွေအရမ်းများလာမယ့် ဆိုရင် employment အတွက်အရမ်းကို စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ စင်္ကာပူမှာ အလုပ်အကိုင်အရမ်းကောင်းတယ်၊ ကျေနပ်လောက်တဲ့လစာရှိတယ်ဆိုပြီး အထူးသဖြင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှ human resource တွေ အရမ်းယိုဖိတ်သွားကြပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေအပြင်နိူင်ငံအတော်များများအတွက် brain drain တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ အခုတော့ ဒုတိယ labour drainက ဒူဘိုင်းဘက်ကို စီးဆင်းနေပါပြီ၊ အမေရိကန်စီးပွားရေးကျမှုကြောင့် investor တွေက ဒူဘိုင်းလို ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကောင်းမယ့်နေရာများမျိုးမှာ လာပြောင်းရွေ့ကျတော့ labourတွေကလည်းလိုက်ပြီပေါ့။
Also visit my webpage ... http://multimedia.stisitelkom.ac.id
my page ... http://www.videochatwithfriends.com/
number of them are rife with
My web page :: http://elevtv.ro
Here is my web blog; level304media.com
information. I am glad that you simply shared this helpful information
my weblog: http://bobozot.com/
Feel free to surf to my homepage ... clickbank-tribune.com
loads up fast! What web host are you the use of? Can
I am getting your associate link for your host? I desire my website loaded up as fast as
my web-site - 9jaconnected.com